Home > Migrant Communities Library Guide > Somali CYA
Waa bilaash is-qoridda maktabaddu. Carruurtu waxay yeelan karaan kaar u gaar ah. Waalidiintu waa in ay saxiixaan foomka uu ilmahoodu kaar ku codsado iyagaana masuul ka ah inay hubiyaan in waqtigooda la soo cesho buugaagta iyo waxyaabaha kale.
Barnaamijyada maaweelada ilmaha
Waxaa isbuuc kasta maktabadda ka jira sheeko sheeko loogu talo galay ilmaha yar ee nus gelinka iskuulka taga iyo maaweelooyin loogu talo galay ardeyda iskuulka aadda taasoo ku toosan waqtiga fasaxa iskuulka lagu jiro. Waxaan kaloon heynaa maaweelooyin loogu tala galay ilmaha yar iyo waalidkiisa iyo naadiga buugga oo ay iska diiwaangelin karaan ilmaha da’kastaba ha noqotee. Waxaad baartaa maktabadda xaafadaada liiska barnaamijyada, ama booqo boggeena Maxaa socda (What's on)
Waxa aad ka qaadan kartid maktabadda
Wax kastoo maktabadda mulkiyadeeda ah, aan ka ahayn DVDga, oo yaal qaybta ilmaha iyo ciyaalka waaweyn waa ay kuu fasaxan tahay inaad ku deynsato kaarkaada maktabadda. Waxaad ku deynsan kartaa inta shey aad dooneyso.
Haddii aad dib u soo celin weyso waqtigii loogu tala galay inaad soo celiso waxaa bixineysaa lacag. Dib ugu soo celi alaabtii aad ka deysatay maktabadda haddii kale waxaad bixineysa $1 sheygiiba.
La bixidda Hal Todobaad uun
Ujrada soo-celinta lala hakaday
DVDya and Cajaladaha fiidiyowga 50c maalintii
Majalladaha 30c maalintii
Suxuunta Muusikada 30c maalintii
La bixidda Saddex Todobaad uun
Buugaagta 30c maalintii
Cajaladaha 30c maalintii
Qalabka (Buug la socda cajalad ama Saxan muusiko) 30c maalintii
Waxaan haynaa buugaag loogu talagalay dhallaanka, carruurta yar-yar, carruurta da'da dugsiga gaaray iyo dhowr-iyo-toban jirka intoodaba. Waxaan haynaa buugaag warbixineed oo loo loogu talagalay inay carruurta ka caawiyaan leyliskooda, waxay weliba u adeegsan karaan si ay isugu diyaariyaan imtixaannadooda.
Waxaan haynaa buugaag Soomaali ku qoran oo carruurta loogu talagalay. Intooda ugu badan waxay ku xaraysan yihiin 493.586; buugga liis-garaynta halkan ka fiiri.
Bogga Liis-garaynta ee Carruurta loogu talagalay (Kid's Catalogue)
Kan waa buugga liis-garaynta ee isticmaalkiisa si gaar ah loogu talagalay carruurta. Waxaa loo isticmaali karaa si buugga liis-garaynta maktabadda loo baaro iyadoo la adeegsanayo kumbiyuutarada maktabadda ku dhex yaalla ama internetka. Waxaa weliba laga heli karaa warar ku saabsan munaasabadaha lagu qabto maktabadda waxuu weliba kuu tabin karaa websaytyada carruurta ku habboon. Baaridda bilaabo.
Masuuliyadda waalidiinta saaran
Waalidiinta iyo daryeeleyaashu iyagaa masuul ka ah inay ka feejignaadaan waxa ay carruurtu ku daawanayaan maktabadda dhexdeeda iyo waxa ay kula baxayaan kaarkooda.
Carruurtu waxay fiirsan karaan oo ay qaadan karaan dhammaan waxyaabaha maktabadda ku jira oo ay ka mid yihiin waxyaabaha ku jira qaybta dadka mudakirka ah loogu talagalay, marka laga reebo qaar ka mid ah cajaladaha fiidiyowga, DVDyada iyo Suxuunta Muusikada kuwaasoo wata calaamado sharciyan xaddidaya daawashadooda ama dhagaysigooda (sida R16).
Maktabaddu masuul kama ah carruurta cid li'i lagu dhaafay. Waxaa suurogal ah in masuuliyiinta ku shaqo leh la waco haddii la heli waayo ama lala xiriiri kari waayo waalidka ama daryeelaha. Xeerashayada degan ee la xiriira Isticmaalka carruurta halkan ayaa laga heli karaa.
Dhallinyarada Qaan-gaarka ah (Young Adults)
Dhallinyarada Qaan-gaarka ah waxay da'doodu u dhexeysaa 13 iyo 18 jir. Waalidiintu waa inay saxiixaan foomka qof kastoo 18 jir ka yar iyagaana masuulka ah inay hubiyaan in waqtigooda la soo cesho buugaagta iyo waxyaabaha kale ee maktabadda laga qaato.
Websaytkayaga waxa ku yaalla qayb aan ugu talagalnay dhallinyarada qaan-gaarka ah, waxaa lagu magacaabaa Teens.
Alaabta wax laga barto
Maktabadda waxa yaalla waxyaabo badan oo wax laga barto ama duruusta caawiya. Waxaa kuwaas ka mid ah hageyaasha duruusta ee NCEA, iyo websaytyo waxtar lehs S*Lab iyo Any Questions.
Dhallinyarada Qaan-gaarka ah
Bogga Liis-garaynta ee Carruurta loogu talagalay